Madaxweyne Xaaf oo eedeeyn u jeediyay dowlada federalka – Banaadir weyne
Madaxweyne Xaaf oo eedeeyn u jeediyay dowlada federalka
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo shir jaraa’id ku qabtay maanta magaalada Dhuusomareeb ayaa ku eedeeyay dowlada inay cunoqabatayn saartay oo ay ka joojisay lacagii dowlada dhexe iyo kuwii Caalamka uga iman jirey.
Shirka jaraa’id ayuu ku sheegay Madaxweyne Xaaf in dhaqaalihii ay ku dhisan lahaayeen ciidamo Boolis laga joojiyay ayna dowladu 19kii bilood ee ugu dambeysay ay cadaadis ku hayso dowlad goboleedka Galmudug.
“Runtii dowladda Federaalka dagaal ayay nagula jirtaa dhaqaalihii waa nagala jaray 19 bilood aan jirnay,maalin walba Guddi federal ayaa naloo soo diraa kuwaas oo Galmudug burburinaya ayuu yiri Madaxweyne Xaaf.
“Waxaan u sheegeynaa beesha caalamka in hantideena la cunoqabteeyay labada lugood iyo labada gcmood ayaan ka xiranahay.”ayuu si kulul u yiri Madaxweyne Xaaf.
Madaxweyne Xaaf ayaa dhaliilay wafdi maanta ay dowlada federalka u dirtey magaalada Cadaado isagoo sheegay inaan lagala tashan isla markaana lacago badan lagu qarash gareynayo diyaarado.
“Iyaga waxa ay qaban karaan midna lama arko odayaashii iyo ciidamadii wixii aan haynay waan geynay labo beel oo isku dhacda in diyaarado iyo wafdi loo soo diro waa arrin ugub ah.”ayuu yiri Madaxweyne Xaaf.
Madaxweyne Xaaf ayaa ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya Kaxandhaale iyo weliba Maxaas inay joojiyaan dagaalka.
Dagaalka ka dhacay Kaxandhaale iyo Maxaas ayaa geystey khasaare badan oo isugu jirta dhimasho iyo dhaawac,waxaana jirta weli cabsi laga qabo in dagaalada ay sii socdaan inkastoo dadaalo badan ay socdaan.
– Somali Weyn News